Isibonisi Esilula Esibanzi - Izimpawu Zedijithali ne-Video Wall Software
IDIGITAL SIGNAGE SOFTWARE
Isofthiwe ye-Digital Signage yamabhizinisi
Mayelana NOKUFUNDA KULULA KAKHULU
Kusebenza Kanjani Ukubonakaliswa Kwezifundo Eziningi
Noma ngabe uyibhizinisi elincane noma ibhizinisi elikhulu, i-Easy Multi Display yisoftware yezimpawu yedijithali eyenza kube lula ukubonisa i-multimedia yakho ekubonisweni okuningi.
Ngelayisense eli-1 elijwayelekile, ungabonisa imithombo engafani engama-24 yemithombo yezindaba ngasikhathi sinye, kuyo yonke imibukiso eyi-6. Khuluma nathi ngezixazululo zebhizinisi lethu ngezinketho zokubonisa ezingenamkhawulo.
Kwe-Easy Multi Display, wonke amakhasimende ahlukile futhi yingakho senza iphuzu lokuhlinzeka nge-100% yensiza eyenzelwe ikhasimende ngalinye!
LANDA ISITOLO SAMAHHALA
Thola Ukufinyelela Okusheshayo
LOKHO LOKUFUNDA KWALOKHI?
I-Easy Multi Display yiyona isoftware ehamba phambili yezimpawu zedijithali yanoma iyiphi inhlangano efuna ukukhombisa imininingwane yedijithali kumakhasimende ayo nakwizivakashi.
Chofoza ngezansi ukuthola okuningi.
Amakhefi nezindawo zokudlela
Izitolo Zemfashini Nezokuthengisa
Isikhungo se-Command & abacimi bomlilo
Xhumana nathi ukuze sixoxe
Iningi lalabo esincintisana nabo bakhokhisa u- € 30 kwesikrini, ngenyanga. Ngenxa yalokhu, ukhokha ngaphezulu kwe- € 360 ngonyaka ngesikrini esisodwa! Abanye esincintisana nabo bakubuza ukuthi uthenge isoftware eyengeziwe ngezindleko ze- € 1200 ephaketheni. Nge-Easy Multi Display, ukhokha kanye kuphela.
I-Easy Multi DISPLAY
Sebenzisa ukubukisa okungafika kwezi-6 ngaphandle kwezindleko ezingezekile.
Azikho izindleko eziqhubekayo noma imali ekhokhwa njalo ngenyanga.
Sebenzisa ikhompyutha yakho ukwenza isoftware.
Ayikho i-inthanethi edingekayo.
Izindleko ziyenyuka ngenombolo yokubonisa.
Khokha imali ekhokhwa njalo ngenyanga.
Thenga isidlali seqembu lesithathu ukusebenzisa isoftware.
Insizakalo esekelwe efwini edinga i-inthanethi.
Ngokukhetha i-Easy Multi Display, ungonga kuze kufike ku- € 250 ngenyanga, lokho kungama- € 3000 ngonyaka kusisombululo sakho sezimpawu zedijithali.
IZINZUZO ZOKULULA KOKUFUNDA KAKHULU
Vula amawebhusayithi, usakaze ividiyo, futhi ubonise amavidiyo endawo, izithombe nomculo.
Khokha kanye ilayisense lakho le-Easy Multi Display bese ulisebenzisa kuze kube phakade.
Kulula ukusebenzisa i-plug futhi idlale isoftware. Azikho izinto eziyinkimbinkimbi zeqembu lesithathu ezidingekayo.
Sinikeza ukusekelwa okuhle. Sesha yethu isisekelo solwazi, noma ucele ukuqeqeshwa okuyimfihlo.
Isoftware isebenza emshinini wakho wendawo. Ayikho i-inthanethi noma amanethiwekhi amafu ayinkimbinkimbi adingekayo.
Ngemvume yethu yebhizinisi, ungakhombisa futhi uqhube ezinye izinhlelo zesoftware!
LOKHO OKUSHIWA YAMAKHAYA ethu
Ngaphambi kokuthi sibhale amamenyu ethu kwizilayidi. Kwakunzima futhi kunomthelela omncane. Nge-Easy Multi Display, ngokushesha sidonsa ukunaka kwamakhasimende ethu.
Umphathi Wezichilo, eBrussels
EMINYE YAMAKlayenti Wethu
Njalo ngenyanga, amabhizinisi angaphezu kwe-150 asebenzisa isoftware yethu ukubonisa ividiyo, izithombe nokuqukethwe kwewebhusayithi ukukhuthaza nokukhangisa ngebhizinisi labo.
Konke okudingayo ukuze uqalise ...
* Imali eyengeziwe yonyaka isebenza kuphela uma ubhalisela okungakithi Ukuzikhethela isivumelwano sokugcina. Chofoza lapha Ukuthola okwengeziwe.
Awudingi ukuba yingcweti yezobuchwepheshe ukuze uvuke usebenzise i-Easy Multi Display. Kungakho isoftware yethu iyi the isoftware ehamba phambili yezimpawu zedijithali
- Ukukhethwa kolimi: English, French, Spanish, Chinese, Deutch kuyaqhubeka ...
Isibonelo sekhemisi nezikrini ezi-4
BUKA WONKE AMA-VIDEO WETHU
Inikezwe amandla yi Joyina.chat
Sawubona, igama lami nginguGuy Condamine, umsunguli we-EMD, ake sixoxe ndawonye.